Xildhibaan ugu yeeray Xukumadda in ay shaaciso sida ay u dhici doonto Doorashada 2020-ka – Kalfadhi
Xildhibaan ugu yeeray Xukumadda in ay shaaciso sida ay u dhici doonto Doorashada 2020-ka
February 9, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble ayaa, isaga oo ka hadlaya munaasabad uu Xisbiggiis Ileys kula biirayey Xisbi kale, waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in 2020-ka ay Soomaaliya ka dhici doonto “Doorasho Qof iyo Cod ah”. Cabsidaas ayuu sheegay in ay Xisbigiisa Ileys la wadaagaan Axsaabta Siyaasadda ee kale.
“Waxa walwal badan ay Axsaabta Siyaasaddu ka qabaan, oo uu ugu horeeyo Xisbiggeena Ileys, sida ay maanta ku socoto uma eka qaab ay dadka Soomaaliyeed ku gaari karaan Doorasho Qof iyo Cod ah” ayuu yiri Xildhibaan Cosoble. “Waxaana sabab u ah aan gaabin ka imaaneysaa dhanka Xukumadda iyo Hogaanka” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Xildhibaanku waxa uu Xukumadda ku eedeeyey in aysan arrintaas ugu jirin dadaal iyo diyaargarow. Waxa uu sheegay in Hindisaha Sharciga Axsaabta, oo uusan Baarlamaanku meel-marin ilaa iyo hadda, ay caddeyn u tahay sida aysan Xukumaddu uga go’neyn Doorasho Qof iyo Cod ah, sida uu hadalka u dhigay.
“Illaa iyo hadda lama baasgareyn (meel-marin) (Hindisaha) Sharciga Doorashada, Baarlamaanna looma soo gudbin” ayuu yiri Xildhibaan Cosoble. “Dadka Soomaaliyeedna werwer weyn ayey ka muujinayaan ineysan ogeyn qaabka ay doorashadu u dhici doonto 2020-ka” ayuu ku daray hadalkiisa.
Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble waxa uu ugu baaqay Xukumadda Soomaaliya in ay Baarlamaanka u soo gudbiso sharciga ay dooneyso in lagula macaamilo Doorashada 2020-ka. “Sharcigaas waxaan u baahanahay inuu noqdo sharci caddaalad ah, marxaladdii la soo dhaafay ka gudbi kara, marxalad axsaab ay wadanka ku tartameyso gaarsiin kara” ayuu yiri Xildhibaan Cosoble.
Xildhibaanku waxa uu ka digay in habka ay dowladdu dooneyso in ay u wajahdo doorashadaas ay la hareer marto Axsaabta Siyaasadda. Waxa uu sheegay in haddii sida ay doorashadaas u dhaceyso aysan awoodaha siyaasadeed ee dalka ka hishiin ay jiri doonaan wax uu ugu yeeray “madmadow” uu sheegay in ay xaaladda sii cakirin karaan.
Puntland: Xukuumadda cusub oo dhegta lagu hayo in la magcaabo
Farmaajo oo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ka codsaday Wada-shaqeyn